Ajụjụ nke izu | KONGOLISOLO
Site na: KongoLisolona: July 4, 2020 00: 55 Enweghị asịsa
Gandhi, Bombay June 9, 1939. Akwụkwọ ozi a gụrụ dị ka ndị a: Ezigbo Enyi m, ndị Enyi agbaala m ume ka m degara gị akwụkwọ na aha mmadụ. Emegwara m arịrịọ ha, na-eche na nke ahụ ...	GỤKWUO
United States agaghị echefu Abraham Lincoln. France ga-echeta General Charles De Gaulle oge niile. China enweghị ike ichefu Mao Tsetung. South Africa n ...	GỤKWUO
Site na: KongoLisolona: Mee 30, 2020 00: 50 Enweghị asịsa
Nke kar ,r,, any we r ask ezi Chineke, b of Chineke nke nna nna any,, ka gbaghara any forgive n'ihi mmehie any for niile. Ka amamihe ya na mmụọ nghọta ya nyere anyị aka. »Ntughari	GỤKWUO
Aug13 09: 14